Spigen Inotangisa Ekutanga Mhosva dzeiyo iPhone 7 uye iPhone 7 Plus | IPhone nhau
Spigen anotangisa ematare ekutanga eiyo iPhone 7 uye iPhone 7 Plus
Spigen ndeimwe yevanonyanya kugadzirwa vagadziri ve iPhone kesi pamusoro pemakore. Iyo mhando nekusimba kwemabutiro ayo inosimbisa izvi.. Uye zvakare, mutengo wemabutiro avo unokwanisika chero bedzi isu tisingazvienzanise neyakavharwa neChinese atinogona kuwana emamwe maeuro paBay. Zvinoenderana nerunyerekupe rwazvino, Apple yakarongerwa kuunza iyo nyowani iPhone 7 uye iPhone 7 Plus mamodheru kutanga kwaGunyana pamwe pamwe nechizvarwa chechipiri cheApple Watch uye nekumirirwa kwenguva refu kweMacBook Pros. Nhasi tatsikisa hombe huwandu hwenhepfenyuro, asi kudzamara ratidziro yepamutemo hatizomboziva kana ichokwadi kana kwete, kunyanya izvo zvine chekuita nekugadzirwa kwayo.
Asi kunyangwe paine chokwadi chekuti makuhwa aya haana kusimbiswa uye acharamba ari kusvika musi wekuratidzwa, Spigen ichangotanga chirongwa chitsva chemabutiro eiyo iPhone 7 and the iPhone 7 Plus, Mhosva dzinogona kutotengwa chaiko kubva pawebhusaiti yavo uye dzinozotumirwa kana Apple ichinge yapa mhando nyowani.
Mune iyo catalog yevhavha yeiyo iPhone 7 tinogona kuwana 18 mhando dzakasiyanakubvira $ 14,99 kusvika $ 39,99 ine akasiyana mavara uye masitaera ekusarudza kubva. Kunyange kana tichitaura nezvazvo iPhone 7 Plus, nhamba yemamodeli aripo yakaderedzwa kusvika gumi neshanu, nemitengo yakafanana neiya yemunin'ina wayo mudiki.
Nehurombo hapana rumwe ruzivo rwatinogona kuwana kuburikidza nemifananidzo, sezvo zvese zvishandiso, zveshuwa, zvinoratidzwa neinoenderana nekavha. Chatinogona kuona neziso rakashama ndiyo mbiri kamera iyo mune dzidziso inotevera iPhone 7 Plus inotakura. Nezve kubatanidza kweSmart Connector, zvinoita sekunge sekureva kwaSpigen ichave iri yechokwadi nekuti haigone kuwanikwa kuburikidza nemabutiro kuburikidza nekuvhura kana zvakafanana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Spigen anotangisa ematare ekutanga eiyo iPhone 7 uye iPhone 7 Plus
Mark Gurman: iyo iPhone ye2017 haizove neimba bhatani uye inosanganisira chip yeFeliCa kubhadhara
Iyi ndiyo nzira iyo Facebook ichaita mari neWhatsApp: kutengesa yako data